🌍 Incwadi yomhlaba wezingane elingene wonke amazwe emhlabeni jikelele - Philipp Winterberg
Kulencwadi Ingabe ngimncane na? abafundi abancane nabadala abafana futhi abaphelezele lentombazanyana uTamia kuloluhambo olugcwele izimanga. Ndawonye bathola ukuthi ubukhulu buyafana nokuthi uTamia nje uyafaneleka ngendlela ayiyo noma adalwe ngayo. “Okuthakathayo” kwehlulela iphepha bhuku lezokuhweba Eselsohr. “iyisimangaliso emindenini ekhuluma izilimi eziningi nasenkulisa,” Kusho i Börsenblatt kanye nephepha ndaba elihlaziya izincwadi i Kirkus Reviews sicela izincomo “eyabantwanyana abakujabulelayo ukupheqa pheqa amakhasi agcwele imilingo yezilwane nezimangaliso zezincazelo [...] ichazwe ngamazwi alula futhi ahlanganisayo nagcwele izithombe ezicabangisana imicabango emihle.”
Bangaphezu kwa 400 abahlaziyi bamabhuku ababambe iqhaza kulencwadi yomhlaba wezingane. Kwesinye isikhathi ucwaningo luthathe izinyanga. “Bekufanele ngifune umhlaziyi waseTibet cishe unyaka wonke,” kusho u Winterberg.
Lencwadi isiyatholakala futhi nangezilimi eziyizi nkulungwane ezihlanganisele, ezifana nolumi Arabic-Tagalog okanye amaPortuguese-Tigrinya – ulimi olukhulunywa e Ethopia nase Eritrea, okuwu kuthi imidwebo nezishiciyelo zabo ziyafana nencwadi le yezingane.
Eminyakeni nakuleminyaka eyishumi ezayo iphrojekti yencwadi yomhlaba wezingane izoqhubeka ikhule. Inhloso ukuhlaziya kancane kancane incwadi Ingabe ngimncane na? ngaphezulu kwezilimu nemisindo engamakhulu amahlanu.
uPhilipp Winterberg wafundela ezokuxhumana ngesayensi, ukusebenza kwengqondo kanye nezomthetho. Uhlala eBerlin futhi uthanda okuhlukahlukene.Uke wayo pharashutha eNamibia, waya kocabangisisa ngokomqondo eThailand, futhi wabhukuda noshaka nama stingrays eFiji nase Polynesia.
Izincwadi zika Philipp Winterberg zisethulela indlela entsha yokubuka izinto ezibalulekile ezifana nobungani, ukucabangela abanye kanye ne njabulo. Zifundwa ngolimi kanye nasemazweni kumhlaba wonke.